Baydhabo Online | The best web site Music Online - News: Marocco vs Cap Verda oo isku Macsalaameeyay 1-1 Kulankii Meertada 2 ee Guruub A
Marocco vs Cap Verda oo isku Macsalaameeyay 1-1 Kulankii Meertada 2 ee Guruub A
Xulalka Marocco vs Capvarde oo ku jiray Guruub A ooYeeshay Lugtoodii labaad ee guruub A ayaa isku Macsalaameeyay 1-1,waxaana Kulankaan qeybtii hore gacan sareeyay Cap Varde oo iska lumiyay dhowr Fursadood.
Daqiiqadii 36 Lambarka 7 ee Cap Varde Ciyaaryahan Platini ayaa Xulkiisa Gool u dhaliyay Kaasoo Natiijada qeybta hore ee Ciyaarta kadhigay in 1-0 Hogaanka looga Hayo Marocco.
qeubtii Danbe Marki la isagu soo noqday gaar ahaan 25kii daqiiqo ee ugu Dambeysay waxaa Ciyaarta Maamulkeeda la wareegay Xulka Marocoo oo Madaxdiisa ay daawaneysay Ciyaartaan waxaana Goolkii Barabaraha u dhaliyay Lambarka 9 kadib Markii Saaxiibkiis uu ka helay baas Gudub ah
Ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1-1iyadoo xulkaMarocoo uu smaeeyay isku dayo fara badan oowaxba kasoonaasoCadan waayeen.
Meertada 3 ee Guruub A oo ah mid xiiso badan ayey Xulalku Fooda isku dari doonaan
Angola vs Cap Varde iyo Koonfur Afrika vs Marocco waxana Xusid Mudan in Kulanakasi laogaan doono cida u gudubeysa wareega 8oo ay ugu wanaagsan tahay Xaga RajadaKooxda Hogaanka u heysa Guruubkaan ee Koonfur afrika oo leh 4 dhibcood una baahan Barbardhac oo kaliya.
Xulka Angola oo ugu hooseya Guruubkaan waxa ay ku soo bixi karaan Hadii laga badiyo Marocco ay iyaguna ka badiyaan CapeVarde waxaana ay hada leeyihiin 1 dhibic
2,260,333 unique visits Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones.